Ubani Umthengi Wakho we-B2B? | Martech Zone
Ubani Umthengi Wakho we-B2B?
NgoLwesibili, ngoJulayi 2, i-2013 Douglas Karr
Sibona amaklayenti ethu elwa kaningi nethoni yokuqukethwe kwabo… bakhathazekile ngokuthi okuqukethwe kwabo kuthuthuke kakhulu noma akunabunkimbinkimbi ngokwanele kubalaleli babo. Sikholelwa ukuthi uhla lokuyinkimbinkimbi lusebenza kakhulu. Abafundi abafuna okuqukethwe kokugunyazwa okuphezulu badlula kokuqukethwe okungenayo intshisekelo. Abayihluleli inkampani noma ukushicilelwa, bamane nje badlule kukho. Okuqukethwe okuyisisekelo kakhulu kusazobalulekile kumathemba entula ukuqonda kwemikhiqizo noma izinsizakalo zakho. Futhi ukubhala okuqukethwe okuphezulu ngaso sonke isikhathi kungabeka umkhiqizo wakho ngaphandle kwezidingo zabo ngokungadingekile.
Abathengi bezinkampani basebenzisa izintandokazi zokuthenga ze-B2C kokuthengiselana kwe-B2B, okusho ukuthi abahlinzeki kumele banikeze isipiliyoni se-inthanethi esibhekiswe kakhulu, nesisebenziseka kalula. Uyamqonda umthengi wakho?
Tags: b2bumthengi we-b2bb2b umuntu
I-WHYAnalytics: Ubani Ovakashela Isiza Sakho?
Amathiphu ayi-10 wezibuyekezo zesimo esingcono